Maxkamada Ciidamada Qalabka sida oo maanta la horgeynayo Xasan Xanafi Xaaji – STAR FM SOMALIA
Wariye Xasan Xanafi Xaaji Xasan oo kamid ahaa Saraakiisha Al-Shabaab u qaabilsanAa dhinaca Warfaafinta kuna eedeesan dilka Wariyaal badan oo Soomaaliya ayaa maanta kasoo hormuuqan doona Maxkamada Ciidamada Qalabka sida.
Xasan Xanafi ayaa Wareysi uu siiyay Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed ku qirtay in uu ku lug lahaa dilal badan oo loo geestay Wariyaal Soomaaliyeed oo dalka Caan ka ahaa, kuwaa ay dileen dagaalyahano katirsan Al-Shabaab.
Sargaalkan Al-Shabaab u qaabilsanaa dhinaca Warfaafinta ayaa laga soo qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya uu ku sugnaa, waxaana in mudo ah gacanta ku heysay Hay’ada Nabad Sugida Qaranka oo baaris dheer ku sameeneysay kiiskiisa.
Markii ugu horeesay ayuu maanta hortagayaa Maxkamada Ciidamada Qaabka sida ee Dowlada Soomaaliya oo kiiska eedeesanahan gacanta ku heysa, waxa uuna horey uga dalbaday Xasan Xanafi Dowlada iyo bulshada Soomaaliyeed in ay ka cafiyaan dambigii uu geestay intii uu Shabaab katirsanaa.
Bahda Warfidiyeenada ee ka howglada dalka ayaa horey ugu baaqay in Wariye Xasan Xanafi la horgeeyo cadaalada lana marsiiyo sharciga dalka waxa uu ka qabao dilalka iyo dambiyadii kale uu geestay .